Backing ilaa iPhone in computer lagama maarmaan iyo muhiim ah. Waxay kaa caawinaysaa in warbixin-shaqsiyeedkaaga sii ammaan iyo xaqiijistay. Waxaa tahay xal badan oo aad ogolaanaysaa gurmad iPhone si fudud. Halkan, waxaan diiradda saaraan kuu sheegaysa seddex ka mid ah. Akhri qaybta soo socda, dooro mid ka mid ah ugu fiican in la sameeyo gurmad iPhone.
Xalka 1. kaabta iPhone for free la Lugood / iCloud Xalka 2. kaabta iPhone in computer la MobileTrans
Xalka 1. kaabta iPhone for free la Lugood / iCloud
Marka ay timaado in gurmad iPhone, Lugood iyo iCloud badan tahay iftiimiyo in aad maskaxdaada. Waxaa sugan, ay tahay gargaarana khayr idiin ah inay gurmad iPhone. Qaybtan, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego sida ay u gurmad iPhone in PC la Lugood iyo sida loo raad raac iPhone in iCloud in faahfaahinta.
IPhone kaabta la Lugood
IPhone kaabta la iCloud
1. Waa maxay Lugood kartaan gurmad?
Iyadoo Lugood, awoodo aad u farabadan oo raad raac ah oo xogta shakhsiga ku saabsan iPhone in PC. Waxa ay sawiro iyo video badbaadiyey ee ku giringiriya Camera ah, xiriirada, xisaab iyo dhacdooyinka jadwalka taariikhda, iyo warqadda jadwalka taariikhda, qoraal cod, Bookmarks Safari, taariikhda, cookies, xogta offline iyo hadda pages furan, soo wac taariikhda, wallpapers, iyo in ka badan. Baro wax badan oo >>
2. tallaabooyinka Easy in ay dib u kor iPhone in PC la Lugood
Tallaabada 1. Open Lugood on PC iyo xiriiriyaan iPhone in PC via cable USB ah.
Tallaabada 2. iPhone si guul ah lagu ogaan doonaa oo muujiyay galeeysid bidix ee Lugood. Riix si aad iPhone hoos AALADAHA si ay u muujiyaan guddi gacanta ay.
Tallaabada 3. Tag hayaan qaybta iyo sax computer Tani . Markaas, guji Back Up Hadda . Sug ilaa habka gurmad la dhammeeyo.
3. View Lugood gurmad on PC
Windows XP, Documents \_ iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta \_ Windows 7/8 / Vista: \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta \_
1. Waa maxay iCloud kartaan gurmad?
iCloud aad ku xoojiya sidii ay gurmad aad iPhone in hadhaysaa via WiFi. Sidaa daraadeed, awoodo aad xogta app gurmad, farriinta muuqaalka ah, wallpaper, goobaha, screen guriga, ururka app, fariimaha (text, MMS oo iMessages) iyo ka badan. Hel info badan oo ku saabsan gurmad iCloud >> .
2. tutorial Easy ku taageerto kor u iPhone la iCloud
Tallaabada 1. Tubada Settings aad iPhone oo shid network Wi-Fi.
Tallaabada 2. Tubada iCloud iyo gasho ID Apple iyo password aad.
Tallaabada 3. Tubada Kaydinta & kaabta dibna ugu noqda kaabta iCloud .
Tallaabada 4. Tubada OK > dib Hadda . Baroorta daqiiqo ilaa habka gurmad la soo gabagabeeyo.
Xalka 2. kaabta iPhone in computer la MobileTrans
Althought Lugood iyo iCloud ay muhiim tahay in ay gurmad iPhone, waxaa weli qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah ee ay ma awoodo gurmad, sida sawir iPhone maktabadda, music iyo playlists ka CD-yada, iyo in ka badan. Si gurmad noocyada kala duwan ee xogta, waxaad u baahan tahay gurmad iPhone ah in software kala iibsiga computer, sida Wondershare MobileTrans . Waxa aad siisaa awood ay uga gurmad oo dhan music, video, sawiro, xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah ee 1 click.
IPhone kaabta in computer una soo celiso telefoon kasta oo ay taageerayaan!
Kaabta music, video, sawiro, xiriirada iyo SMS on iPhone in computer.
Ceshano gurmad iPhone iyo wareejiyo iDevice, Android iyo telefoonka Nokia.
Bedelka content ka iPhone in Android iyo Nokia phone iyo iDevice 1 click.
Waraaqda gurmad Lugood una soo celiso ah (n) phone Android, phone Nokia iyo qalab.
La jaan qaada iPhone 3GS / 4 / 4s / 5S / 5 / 5C / 6s (Plus) / 6 (Plus) markii socda macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. Ku rakib Wondershare MobileTrans on computer Windows
Download version maxkamad free of Wondershare MobileTrans on computer Windows. Ku rakib iyo waxa maamula. Si aynu shaqo software tan si sax ah, waa in aad leedahay Lugood lagu rakibay kombuyuutar Windows ah. In uu furmo suuqa hoose, u tag kaabta iyo Soo Celinta iyo guji kaabta inuu soo galo suuqa kala kaabta.
Ka qaada ah cable USB Apple in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer Windows. Wondershare MobileTrans Ayaa lagu ogaan doonaa oo la aqoonsado aad iPhone dhakhso oo muujiyaan furmo kaabta.
Tallaabada 2. Dib ugu iPhone in computer ee 1 click
Guudmar content oo dhan kuu soo gudbin karaa oo sax kuwa aad doonayay. Markaas, riix Start Copy . U hubso in aan barkinta aad iPhone. Markii uu dhamaystay, riix OK .
Tallaabada 3. Soo Celinta telefoon kasta oo ay taageerayaan la gurmad iPhone
Iyadoo iPhone gurmad file, aad u soo celin kartaa telefoon kasta oo ay taageerayaan (Waxay noqon kartaa telefoonka Android / Nokia Symbian iyo iDevice). In uu furmo suuqa hoose, guji soo celi . In ay menu hoos-hoos. Dooro ka MobileTrans file gurmad. Markaas, xirmaan telefoon kasta oo ay taageerayaan in computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah.
Dhammaan files gurmad ka soo muuqanayaan column bidix. Raadi gurmad iPhone iyo dooran content sida aad doonayso inaad dhexe. Markaas, riix Start nuqul si loo soo celiyo content iPhone in phone kasta oo waxaa lagu taageeray.
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in Lugood?
Sidee si ay u gudbiyaan Photo Library ka iPhone in Computer?
Sida loo dhoofiyo iPhone Xiriirada in Gmail?
Sidee si ay u gudbiyaan Roll Camera ka iPhone in Computer?
Sida loo Copy Music ka Mac si iPhone?
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Xiriirada in VCF?
Sida loo maamulo Photos on Your iPhone?
Farshaxanka ma muujisid on Your iPhone? Halkan yahay xalkaaga aad
> Resource > iPhone > Sida loo iPhone kaabta in Computer leh oo aan Lugood